तपाईको घर/जग्गा विक्रीकाे लागि हाम्रो वेबसाइटमा नि:शुल्क Listing गर्नको लागि यहां Click गर्नुहोस
#क्षेत्रफल : विभिन्न क्षेत्रफल भएका जग्गाहरु
#मोहडा : विभिन्न दिशामा फर्किएका
#बाटाे : १६/१८/२० फिट
#मुल्य : Negotiable
#थप जानकारिकाेलागि सम्पर्क गर्नुहाेला
उदयपुरको बलम्ताको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Balamta in udayapur district
उदयपुरको आँपेटारको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Aaptar in udayapur district
उदयपुरको बर्रेको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Barai in udayapur district
उदयपुरको बाँसबोटेको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Basabote in udayapur district
उदयपुरको भुटारको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Bhuttar in udayapur district
उदयपुरको डुम्रेको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Dumre in udayapur district
उदयपुरको हडियाको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Hadiya in udayapur district
उदयपुरको हर्देनीको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Hardeni in udayapur district
उदयपुरको इनामेको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Iname in udayapur district
उदयपुरको जाँतेको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Jante in udayapur district
उदयपुरको जोगीदहको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Jogidaha in udayapur district
उदयपुरको कटुन्जेबाबलाको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Katunjebawala in udayapur district
उदयपुरको खाँबुको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Khanbu in udayapur district
उदयपुरको लाफागाउँको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Laphagau in udayapur district
उदयपुरको लेखानीको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Lekhani in udayapur district
उदयपुरको लेखगाउँको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Lekhgau in udayapur district
उदयपुरको लिम्पाटारको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Limpatar in udayapur district
सुनसरी धरान 15 वडा काार्यालय नजिक आकर्षक घडेरी तु-बिक्रिमा । ghaderi jagga / land is for sale in dharan sunsari near wada karyala.
सुनसरी धरान मिलन चाेक एरियामा आकर्षक घडेरीहरु तु-बिक्रीमा । ghaderi jagga / land is for sale in dharan sunasri at milan chowk.
सुनसरी धरान6माथिल्लाे पानबारीमा आकर्षक घडेरी तु-बिक्रीमा । ghaderi jagga / land is for sale in dharan sunasri at mathillo panbari .
सुनसरी धरान सिद्धकाली चाेक नजिक आकर्षक घडेरीहरु तु-बिक्रिमा । Ghaderi jagga / land is for sale in dharan sunasri siddhakali chowk.
सुनसरी धरान सुम्निमा चाेक एरियामा आकर्षक घर बिक्रिमा । Ghaderi jagga / land is for sale in dharan sunasri near sumnima chowk.
संखुवासभाको बाह्रविसे बजारको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रीमा । jagga / ghaderi / land for sale at Bahrabise bajar in sankhuwasabha district
संखुवासभाको वालाको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रीमा । jagga / ghaderi / land for sale at Bala in sankhuwasabha district
संखुवासभाको वानाको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रीमा । jagga / ghaderi / land for sale at Bana in sankhuwasabha district
संखुवासभाको चेपुवाको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रीमा । jagga / ghaderi / land for sale at Chepuwa in sankhuwasabha district
संखुवासभाको किमाथांकाको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रीमा । jagga / ghaderi / land for sale at Keemathnka in sankhuwasabha district
सोलुखुम्बुको वासाको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रीमा । jagga / ghaderi / land for sale at Basa in solukhumbu district
सोलुखुम्बुको भकान्जेको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रीमा । jagga / ghaderi / land for sale at Bhakanje in solukhumbu district
सोलुखुम्बुको मुक्लीको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रीमा । jagga / ghaderi / land for sale at Mukali in solukhumbu district
सोलुखुम्बुको नाम्चेको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रीमा । jagga / ghaderi / land for sale at Namche in solukhumbu district
सोलुखुम्बुको नेचा बतासेको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रीमा । jagga / ghaderi / land for sale at Necha Batase in solukhumbu district
ओखलढुङ्गाको बलखुको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Balakhu in okhaldhunga district
ओखलढुङ्गाको बरुणेश्वरको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Baruneshwor in okhaldhunga district
ओखलढुङ्गाको बेतीनिको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Betini in okhaldhunga district
ओखलढुङ्गाको भडौरेको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Bhadaure in okhaldhunga district
ओखलढुङ्गाको भुसिङ्गाको विभिन्न ठाउहरुमा आकर्षक जग्गाहरु बिक्रिमा । jagga / ghaderi / land for sale at Bhussinga in okhaldhunga district